Kutheni iStainless steel Grill yam iRusting?
Iigrill zangaphandle ezenziwe ngensimbi engenasici zixhomekeke kwiimeko ezininzi ezinzima. Ezi ziquka imozulu, ubushushu, ii-agent zokucoca iikhemikhali kunye nemikrwelo, phakathi kwezinye, nto leyo ezenza zibe sesichengeni ngakumbi kukuhlwa kunye namabala. Nokuba igama lezinto s...
Indibano yeyona ndlela ilungileyo yokunxibelelana kunye nokunxibelelana nabahlobo; ibarbecue kwindibano inokukhuthaza ngakumbi ubuhlobo phakathi komnye nomnye. Kodwa ukulungiselela i-barbecue edinayo lilungiselelo elidinisayo ngaphandle koncedo lwezalamane kunye nabahlobo. Uyenza njani...
Sivuyisana neChuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd. ngempumelelo yayo epheleleyo ekuthatheni inxaxheba kwi-CCH2021 10th internetional franchine exbibition Show. Ngelixa ufikelela kwizivumelwano zentsebenziswano okanye iinjongo nabathengi abaninzi,...
Izinto ezili-11 onokuthi uzenze kwiHalloween ukuba awuzukuQhubela okanye ukuNyanga
Awucebanga ukuya kwindlu ngendlu? Nazi izinto ezimbalwa ze-Halloween-themed ongayenza kanye ekhaya (okanye kufuphi), kunye nabantwana okanye ngokwakho. Izinto ezonwabileyo onokuthi uzenze kwiHalloween ekhaya: 1. Zihombise iiKuki okanye iikeyiki Akuyiyo iHalloween ngaphandle kwentabalala yeelekese, akunjalo? Qokelela abantwana bakho,...
Ingaba ilahle yakho ikulungele nini ukugcada?
Ngenxa yokuba ilahle lijika libe mhlophe, akuthethi ukuba lixesha lokupheka. Ukubeka i-burgers ifumana kunye ne-steak kwi-grill ngokukhawuleza ukuba uthuthu lwamalahle luya kutshisa kuphela ngaphandle kwenyama. Xa oku kusenzeka, kuya kufuneka ushiye inyama kwi-grill ixesha elide ukuze uqiniseke ...
I-4 + 1 i-grill yegesi yangaphandle
I-CLUX 4-Burner Gas Grill eneSide Burner yeyona ndawo ifanelekileyo yokupheka yabaqalayo kunye nabathanda ukuzolisa ngokufanayo. Ngendawo yokupheka eyaneleyo yokondla amaqela amancinci kunye naphakathi, isitshisi esisecaleni esisebenzayo sokutshisa, ukumisa kunye nokufudumala, isiciko esinzima sensimbi engenasici, kunye ...
Umboniso we-CCH2021 we-10 we-intanethi ye-franchine
CCH2021 Umboniso we-10 wamazwe ngamazwe we-franchise uMboniso we-Franchise wase-China wamkelwa liSebe loRhwebo lase-China kwaye wasekwa e-Beijing ngo-1999.
IShenzhou 13 yaphehlelelwa ngempumelelo kwaye yamiswa ngempumelelo!
ngu admin on 21-10-16
Ngokwe-Ofisi yobuNjineli beNdawo yaseChina, ngo-0:23 ngo-Okthobha 16, 2021 ixesha laseBeijing, i-Long March 2 F Yao 13 rocket carrier ethwele isiphekepheke se-Shenzhou 13 esiqhutywayo siya kuchaneka ngexesha elicwangcisiweyo kwiZiko lokuQaliswa kweSatellite eJiuquan. Emva kokutshisa kunye nokuqalisa, malunga...
Yintoni onokuyipheka kwi-Oveni yePizza yegesi Ngaphandle kwePizza?
Ngaba uyazibuza ukuba kufanelekile ukutyala imali kwi-oveni yepizza ukuba yonke into onokuyipheka yi-pizza-emva kwayo yonke loo nto, ngokuqinisekileyo nabona bathandi bepizza abakhulu phakathi kwethu abanakuyitya yonke imihla! Kulungile, ubusazi ukuba esi sisiqalo nje sento onokuyipheka kwi-oveni yepizza yegesi? Kukho ukhetho oluninzi olwahlukeneyo...
Umahluko phakathi kwebarbecue yaseTshayina kunye nebarbecue yangaphandle
Ukongeza ekudumeni kakhulu kwilizwe lethu, i-barbecue nayo ithandwa kakhulu phesheya, kodwa sonke siyazi ukuba ukwenza i-barbecue ngokuqinisekileyo kwahluke kwilizwe ukuya kwelinye, ngoko makhe sijonge i-China. Yintoni umahluko phakathi kwebarbecue kunye nebarbe yangaphandle...
Malunga nokupakishwa kwegrill
Nangona iigrill zikhangeleka njengezinto ezomeleleyo eziza kuthuthwa, zisafuna ukupakishwa ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba azonakaliswa lulwelo okanye ukuphathwa ngokurhabaxa. Makhe ndikucacisele iipakethe ezahlukeneyo zeegrill zebarbecue ezininzi ezisandula ukwenziwa yinkampani yethu ye-clux ...
Bahlobo bam bonke, nge-1st Oct. siza kuba neentsuku ezi-3 zokuphumla. Ukubhiyozela uSuku lweSizwe lwaseTshayina. Yintoni uSuku lweSizwe lwaseTshayina kwaye lugcinwa njani? USuku lweSizwe lwaseTshayina, olubizwa ngokuba yi-国庆节 (Guóqìng jié) ngesiTshayina, lubhiyozelwa ngomdla omkhulu minyaka le ngo-Okthobha woku-1 njengeholide kawonke-wonke. ...
Bhalisela iNcwadana yethu ukuze ufumane iindaba eziBalulekileyo, iZibonelelo eziMangalisayo kunye neeScoops zangaphakathi: